Kitra: miantso ireo ligy 22 ny mpitia kitra hifidy an’i Lova | NewsMada
Kitra: miantso ireo ligy 22 ny mpitia kitra hifidy an’i Lova
Efatra andro sisa, higadona ny andro hanatontosana ny fifidianana ho filohan’ny federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF). Kandidà sivy mirahalahy mianaka ny hiady izany toerana izany, amin’ity. Anisan’ireo Ramisamanana Lova, filoha mpanorina sady mpitarika ny fikambanana Alefa Barea. Anisan’ny tanora indrindra amin’ireo mpifaninana ny tenany. Vao herintaona ny tena nahalalan’ny besinimaro azy, na efa nilona ao anatin’ny baolina kitra, antaony maro aza izy. Anisan’ny nahalalana azy ny nahitany ireo lalao firahalahiana miisa efatra, nataon’ny Barea de Madagascar. Raha tsiahivina, fihaonana tamin’i Kaomoro, tamin’i Ogandà, tamin’i Togo ary tamin’i Bosnie Herzegovine.
Manana traikefa sy ny fahaizana izy ary tena nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy tamin’ny fanohanana ny Barea de Madagascar. Manoloana izany, nahatsikaritra ireo mpitia baolina kitra malagasy ka nankahery sy nanohana azy, haka ny toeran’ny filohan’ny federasiona.
Tokana ihany ny tanjony, ny hampiroborobo ny baolina kitra eto Madagasikara.
Hatrany am-boalohany, efa nanana finoana i Lova fa tsy maintsy tafita amin’ny “Can 2019” ny Barea, na betsaka aza ireo tsy natoky izany. Ankehitriny, tanteraka izany noho ny finiavana sy ny ezaka rehetra nataony, tamin’ny fanohanana sy ny fanampiana ny Barea, hahatrarana izany tanjona izany.
Tsy ireo mpanohana anefa no handatsa-bato fa ireo filohan’ny ligim-paritra 22. Noho izany, manao antso avo ho an’ireo mpitantana ireo ligy manerana ny Nosy, ireo mpitia baolina kitra hahay hifidy ary handatsaka ny vatony ho an’i Lova, ny asabotsy 3 novambra ho avy izao.